Umatshini wokucoca oomileyo kangakanani uluhlu lwamanani
Umatshini wokucoca oomileyo unxalenye ebalulekileyo yabahlambisi abomileyo, akukho zityalo ezihlambulukileyo eziza kusinako ukugqiba inkqubo yokuhlamba, ubukho bamanzi abacocekileyo abunenjongo, ishishini lomcoco ocolileyo ufuna ukuphumelela, alufunanga kuphela abacocekileyo abomileyo, kubaluleke kakhulu kunomgangatho othembekileyo wokuhlambulula oomileyo.
Ukucoca i-dryer ngokubaluleka komcoco ococekileyo kubonakala, kodwa ukufuna ukukhetha umgangatho othembekileyo wokuhlambulula oomileyo akuyona into elula, abatshali-mali abaninzi bayazi ukuba iindleko eziphezulu zokucoca i-dryers, zivame ukukhetha izinto ezincinci , kodwa ngenxa yoko, usebenziso luya kuba nefuthe elibi kumatshini ahlambulukileyo aphelileyo, ekugqibeleni luyakwandisa iindleko. Ngoko, ukhetho lwabacebisi abomileyo okanye bafuna umgangatho wokuqala. Ewe, oku akuthethi ukuba awukwazi ukucinga ngento yentengo.
Namhlanje, ukuphuculwa kwemboni yokucoca iomile, abacoca abacocekileyo bahlala behlaziywa rhoqo, ixabiso lentsimbi elomileyo luchukumiswe yimiba emininzi, engahambelani. I-brand cleaners cleaners, ukusebenza, imodeli, amandla kunye nokunye kuya kuba nefuthe elikhulu kwixabiso layo. Ngokuqinisekileyo, umgangatho werherhe eyomileyo iyalinganiswa ayikwazi ukuthembela kuphela kwixabiso. Ukucoca i-dryer ayiyonto ephakamileyo, umgangatho uya kuba ngcono. Ukucoca i-dryers ye-cleaners cleaners, khetha ukuzifanisa neyona nto ibaluleke kakhulu. Ngokomzekelo, intsebenziswano encinci yoshishino lokucoca. , LTD. , ukuhlamba umbane: nayo ayiyi kukhulula, ngokude ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zemihla ngemihla, ukuba ngaba abatyali-mali bachitha kakhulu ukuthenga i-tetrachlorethylene abacocekileyo abacocekileyo, akuyiyo inkunkuma kunye neendleko?
Ukukhetha nokuthenga kwabahlambululi abomileyo kubaluleke kakhulu, okwenyani, ukuba ngaba abatyali-mali bathetha ukucoca ucocekile ukuba bajoyine, ekukhethweni nasekuthengeni izixhobo zokusebenza zokucoca ezinomileyo ukugcina ingxakeko kugcina ingxaki kunye nokugcina imali. Kwi-EEJEAN yamazwe ngamazwe, zonke iintlobo zokucoca ezicoca, iindidi, ixabiso elingu-ENEJEAN sele sele lineminyaka engama-20 yembali yophuhliso, uphando oluzimeleyo nophuhliso lwezixhobo zokusebenza, umgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi, lingabelana kakuhle neemfuno zabasomali. I-ENEJEAN ecocekileyo i-RMB, kunye ne-RMB, kunye neenkcukacha zayo zokucoca iimpahla ezincinci kuphela ezimalunga ne-3-50000 yuan i-RMB, ngoko ke qhafaza i-ENEJEAN, khetha iipokhethi ezinokusetyenziswa kwexabiso elininzi, unokufumana inkxaso nenkxaso epheleleyo.
Ngaphezulu kukhona uhlalutyo malunga noluhlu lwamaxabiso e-washer owomileyo, ukuba ufuna ukwazi ulwazi oluthe xaxa okanye unomdla wokujoyina umatshini wokucoca unomnxeba unokuqhagamshelana nesevisi yabathengi kwi-intanethi okanye uphinde uphewule amanye amanqaku kule ndawo.
Inqaku lokugqibela: Ziziphi iimfuno zokucoca ezico...
Inqaku elilandelayo: Vula abacocekisi abomileyo bad...